Self-enamathelayo Fibreglass mesh Tape - China QuanJiang izinto ezintsha
Self-enamathelayo fiberglass mesh tape olukiweyo yi C-iglasi fiberglass vulu, wawutyabeka kunye zokwaleka kwealkali ukumelana kunye self-enamathelayo glue. It yenzelwe ukusetyenziswa olune edibeneyo ukubethelela amalungu ebhodi gypsum, wokulungisa drywall, njl
QUANJIANG yenye abenzi abaziintloko nababonelela omnye ehlabathini yemiyinge edumileyo self-enamathelayo fiberglass mesh tape eTshayina, bamkelekile ukuba athenge okanye fiberglass self-enamathelayo ihoseyile wena mesh tape senziwe e China ufumane isampuli simahla ukususela efektri yethu.
Self-enamathelayo fiberglass Mesh Tape
Iimathiriyeli: C-iglasi fiberglass vulu
Ngeso lenyama: coating kwealkali ukumelana kunye self-enamathelayo glue.
ubungakanani enemingxuma: 9 × 9mesh / intshi, 4x5mm, 5x5mm, 10 * 10, njl
Ubunzima: 60g / m2, 65g / m2, 70g / m2, 75g / m2, 90g / m2, njl
Ububanzi: 48mm, 5cm, 76mm, 10CM, esibude buyi-15, esiyi-20 cm, 2inch, 3inch, 4inch njl
Ubude: 20M, 45M, 90M, 153M, 150ft, 300ft njl
ukumelana Excellent kwealkali, amandla aphezulu saluqilima, isimilo esihle ngcina
roll ngamnye engxoweni yeplastiki okanye shwabana oshushu kunye ilebhile, 2 intshi okanye iphepha 3 intshi ityhubhu.
Sisebenzisa kwizinga eliphezulu kwealkali Ukwaleka ukumelana kunye ngcina kulu, kubaluleke kakhulu
A.The umnatha nto esisigxina ngamandla kakhulu kwaye vulu fiberglass akukho lula ukuhamba okanye iwe
B.The self-enamathelayo fiberglass mesh tape onesimilo ezilungileyo ngcina kwaye iza kugcinwa ixesha elide, ngexesha elifanayo tape kulula ukuba unroll, kungenxa kulu wethu enamathelayo into ethile igqibeleleyo.
Ukusebenzisa ne compound ngokudibeneyo ukubethelela amalungu ebhodi gypsum, nokulungisa drywall, njl
iisampuli Small: free
Previous: Fibreglass Drywall Joint mesh Tape
Okulandelayo: Self-enamathelayo Fibreglass enemingxuma / Fibreglass njengonombombiya zemodeli GRC kunye EPS
Ingcina Fibreglass nylon
Fibergalss Bukanqinishe nylon
Fibreglass Self Bukanqinishe enemingxuma
Self Bukanqinishe Fibreglass enemingxuma
Self Bukanqinishe Fibreglass mesh Tape
Self Bukanqinishe Fibreglass Tape
Self Bukanqinishe Glass Fibre enemingxuma
Self Bukanqinishe mesh Tape